Part 1: Gịnị bụ PhoneClean
Part 2: The kasị mma PhoneClean Alternative - Wondershare SafeEraser
Edebe gị iPhone ọcha dị ezigbo mkpa na ndị ọzọ ụzọ karịa ọtụtụ ndị mmadụ mara. Nke a bụ mere inwe software na-enyocha kwa gị iPhone na ana achi achi na onye data-apụghị leaked dị mkpa. A ngwá ọrụ iji hụ na gị na iPhone anọgide onwe bụ PhoneClean. PhoneClean juputara-enyocha kwa gị iPhone ịchọta niile nke gị data na nwere ike ịnwe onwe ozi.
Nke a na-emekarị data mejupụtara gị niile ozi, nchọgharị akụkọ ihe mere, na-akpọ akụkọ ihe mere eme, ozi ịntanetị na ọbụna Safari Kuki. Ị ahụ ga-esi na-ahọrọ nke ha na a ga-ewepụ site na ngwaọrụ gị hụ na gị onwe ozi.
E wezụga na-edebe gị onwe ozi nkeonwe, PhoneClean na-enyekwa onye ọrụ na ọtụtụ ndị ọzọ bara uru. Ụfọdụ n'ime ha na-agụnye;
PhoneClean awade onye ọrụ a otu nkwụsị ngwọta maka iOS nhicha na njikarịcha
Ọ bụ ihe ize ndụ free nakwa n'efu bụ ezie na e a na-akwụ ụgwọ nweta nkwalite nke pụtara na ụfọdụ atụmatụ nwere ike na-arụ ọrụ na free version.
Ọ utilizes n'elu 20 achọpụta teknụzụ na nwere ike iwepụ ihe karịrị 30 ụdị nke junk faịlụ site na gị iPhone.
Nwere ike mbo mbuli gị iPhone si ọsọ na arụmọrụ nanị otu click
Atụmatụ a ole na ole ndị ọzọ iPhone ngwaọrụ na ike abịa kemfe ụbọchị ndụ gị
PhoneClean otú Otú ọ dị abịa na a ọnụ ọgụgụ nke nsogbu n'ihi na ọrụ. Ebe a bụ ole na ole n'ime ha;
Ọ na-ewe ogologo oge maka software mezue a Doppler otú i nwere ike na-eji ya ma ọ bụrụ na ị bụ onye obere mmachi na oge.
N'oge scanning usoro, e nweghị kwụsịtụ ma ọ bụ malitegharịa buttons nke pụtara na ị ga na-eche maka usoro iji wuchaa.
Ọtụtụ ọrụ ga-achọ ịhụ otu nhọrọ iji họrọ faịlụ ha ga-kama ịzọpụta
Ọ na-adịghị egosi na onye ọrụ faịlụ na ga-ehichapụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ịmata ihe a na-ehichapụ ha ntị n'ihi na udo nke uche.
Ụfọdụ ndị mmadụ dị ka a scanning usoro na agaghị oge niile ha nwere. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-akpọrọ oge gị na-amasị a PhoneClean ọzọ nke ga-enye unu niile uru na onye ọ bụla nke ọghọm nke PhoneClean, nwere ike ị chọrọ lelee Wondershare SafeEraser. Wondershare SafeEraser-eme ihe karịrị nnọọ iṅomi gị iPhone na na-na gị onwe ozi onwe. Ụfọdụ n'ime ya atụmatụ na-agụnye:
SafeEraser ana achi achi na niile gị onwe data na-na-adịgide adịgide ehichapụ iji hụ kacha nzuzo.
Ọ ga-doro anya cache na nchọgharị akụkọ ihe mere ịnọgide na-ozi nbanye gị onwe
Ana achi achi na-ehichapụ faịlụ na-adịghị recoverable
SafeEraser nwekwara ike ekwe ka ị Ihichapu ngwaọrụ gị na-adịgide adịgide ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị chọrọ
Enye gị ohere ịhọrọ faịlụ na ị chọrọ ihichapu na ndị ị ga-achọ ịnọgide na-
Eji US Military usoro nke ebibi data dị otú ahụ na onwe ozi-apụghị natara
Ọ enye gị ohere ike ohere nchekwa na ngwaọrụ gị site erasing ụfọdụ faịlụ
I nwere ike ịgbalị Wondershare SafeEraser free maka 15 ụbọchị
Olee otú iji Wondershare SafeEraser ọcha gị iPhone
Wondershare SafeEraser bụ gị 1 click ngwọta maka nhicha gị iPhone. Ọ bụ ngwa ngwa na oru oma. A bụ otú ọcha gị iPhone na iji ngwa a na mfe iso nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1: Mgbe echichi, Run SafeEraser na mgbe ahụ jikọọ ekwentị gị na kọmputa gị site na iji USB cables. Ngwa kwesịrị ịchọpụta na-egosipụta na ekwentị gị dị ka e gosiri n'okpuru.
Nzọụkwụ 2: nke 5 atụmatụ na ekpe, họrọ 1-Pịa Hichaa.
SafeEraser ga-akpaghị aka iṅomi ngwaọrụ gị dị ka oyiyi n'okpuru na-egosi.
Nzọụkwụ 3: Ozugbo scanning usoro bụ zuru ezu (ọ dịghị ewe nnọọ ogologo), ngụkọta ego nke junk faịlụ ga-egosipụta na nke pụrụ ịkpata window dị ka e gosiri oyiyi n'okpuru.
Niile i nwere ime ugbu a na-pịa "nzacha na mkpocha" na ngwa ga-onwe elu ohere na gị iPhone site na iwepu niile junk faịlụ. Ọ dị ezigbo mkpa na ị na-iPhone ejikọrọ n'oge dum usoro iji hụ na ọ na-eme n'ụzọ ziri ezi.
N'ikpeazụ, Wondershare SafeEraser ga-egosi gị window n'okpuru o doro anya na-egosi na nzacha na mkpocha zuru ezu na ngụkọta size nke faịlụ ẹfep.
Ị nwere ike ma pịa "Home" laghachi na isi window ma ọ bụ "Rescan" na-amalite usoro nile ọzọ.
Dị n'elu ka mfe nzọụkwụ-egosi, Wondershare SafeEraser na-eme ka usoro a dị mfe. Ihe niile ị chọrọ ime bụ ikwunye na ekwentị gị na-enye ngwa ole na ole iwu. Nke a n'elu nke eziokwu ahụ bụ na ngwa nwere ike na-eme ọtụtụ ihe karịrị nanị ihichapu achọghị junk faịlụ bụ ihe na-eme ka SafeEraser zuru okè PhoneClean ọzọ.
> Resource> iPhone> PhoneClean Alternative: Olee otú ọcha gị iPhone na 1-click